AmaNgqina KaYehova - Inkolelo Yokholo Intsingiselo
Ukuxhathisa amaNgqina kaYehova
Abanye abangakholelwa kuThixo bayakuxhalabisa inkolo kwaye banamava amaninzi ngemfundiso yobuKrestu, kodwa banokuzifumana bengalungiselelanga ukuba iNgqina likaYehova eliza kumngqongqo emnyango. Iimbono zeMboniselo yeBhayibhile kunye neTrakthi yoMbutho zihluke kwiiNtsapho zamaProtestanti, ngoko ukuba uya kuxoxa ngeemfundiso zeNqabayokulinda zeMbali kunye neenkolelo zamaNgqina kaYehova , kufuneka uqonde ukuba zeziphi iimeko ezahlukeneyo.
Uchazwe apha ziimfundiso ezili-10 ezibalulekileyo ezihluke kwiintlolelo zobuKrestu kunye nezokukunceda uqonde ngakumbi kwaye uphikisane ngamaNgqina kaYehova.
Coreyjo / iWindows Domain
AmaNgqina akholelwa kuphela kuThixo omnye, odwa yedwa kunye negama lakhe nguYehova. UYesu, njengonyana kaYeho- va, ungumntu ohlukileyo wesibini kuphela koyise. Umoya oyingcwele (ongaphunyekanga) nguYehova uThixo osebenza ngamandla. Nanini na xa uThixo ebangela ukuba kwenzeke into ethile, usebenzisa umoya wakhe oyingcwele ukwenza oko. Umoya oyingcwele awuyena umntu ngokwakhe.
UThixo akazange adale i-Universe ngokuthe ngqo
AmaNgqina akholelwa ukuba uMikayeli oyiNtloko yeLizwe nguyena kuphela into uYehova ayenayo. UMichael wadala yonke into phantsi kolawulo lukaYehova. Bakholelwa ukuba uYesu wayenjalo uMikayeli wenza inyama. UMichael, obizwa ngoku nguYesu, ungumzuzwana kuphela kuYehova ngamandla kunye negunya.
Akukho Mfazamo Ongunaphakade
AmaNgqina akholelwa ukuba isihogo , njengoko kuchazwe eBhayibhileni, sichaza nje ingcwaba emva kokufa. Kwezinye iimeko, kunokubhekisela ekubhujisweni ngonaphakade. Qaphela ukuba bayayenqaba inkolelo yobuKristu emphefumlweni womntu. Izinto eziphilayo (kubandakanywa nabantu) abanalo umphefumlo, kodwa kunoko ziyimiphefumlo kunye nazo.
Ngama-144,000 kuphela aya eZulwini
AmaNgqina akholelwa ukuba kuphela abambalwa abakhethiweyo-ababhekiselelwe kubo njengothanjisiweyo, okanye "iqela elithembekileyo nelithembekileyo" - baya ezulwini. Baza kuba ngabagwebi kwicala likaYesu. Kukho kuphela i-144,000 yeklasi yekhoboka epheleleyo. (Qaphela ukuba inani elipheleleyo labathanjisiweyo lirekhodiweyo lidlula le nombolo) Ngamanye amaxesha, ilungu lathanjiswa lingaba nesigxina sawo senziwa nguYesu ngesono esithile okanye into engafanelekanga. Xa oku kwenzeka, umthambisi omtsha ubizwa. AmaNgqina akhunjuzwa ukuba abekhoboka elithembekileyo nelicacileyo ngokuhambelana neenqweno zikaYehova kuba bameli bakhe emhlabeni. Iimbono zooMthanjiswa ngothanjisiweyo zivame ukutshintsha rhoqo rhoqo xa isizukulwana sika-1914 sazaliswa ngamaNgqina athanjisiweyo.
Uvuko lomhlaba kunye neParadesi
AmaNgqina angathembekanga alindele ukuhlala ngonaphakade apha apha emhlabeni. Abanayo "ithemba lasezulwini." Kukholelwa ukuba amaNgqina athembekileyo kuphela aya kusinda iArmagedon aze aphile ukuze abone ukuBusa kukaKristu Kweminyaka Eliwaka. Phantse wonke umntu owake waphila uya kuvuswa aze aphinde avuselelwe, kodwa oku kubandakanyi abo ba bulawe ngeArmagedon. AmaNgqina aseleyo aya kuqeqesha abavusiweyo ukuba bakholelwe iimfundiso zeMboniselo yeMboniselo baze banqule njengokuba benza. Baya kusebenza kunye nokwenza iParadesi ibe ngumhlaba. Nabani na umntu ovusiweyo onqaba ukuhambelana neli lungiselelo elitsha uya kubulawa ngonaphakade nguYesu, akaze avuke kwakhona.
Bonke abangewona amaNgqina kunye neZizwe "zehlabathi" ziphantsi kolawulo lukaSathana
Nabani na ongeyena wamaNgqina kaYehova 'ngumntu wehlabathi' kwaye ngoko ke inxalenye yeenkqubo zikaSathana zezinto. Oku kwenza bonke bethu abahlobo ababi. Bonke oorhulumente kunye nemibutho engekho yeMboniselo yonqulo ibonakala njengenxalenye yenkqubo kaSathana. AmaNgqina avunyelwe ukuba azibandakanye kwizopolitiko okanye kwiinkonzo zonqulo ngenxa yesi sizathu.
Ukususwa kunye nokuxhatshaliswa
Enye yezenzo ezingaphezu kweengxabano zoMbutho ukususwa ekuhlanganyeleni, oko kukuhlobo lokuxothwa kunye nokuphepha konke. Amalungu angasuswa ekuhlanganyeleni ngenxa yokwenza isono esinzulu okanye ukungabi nalukholo kwimfundiso yoMbutho kunye negunya. INgqina elinqwenela ukushiya uMbutho linokubhala incwadi yokudibanisa. Ekubeni izigwebo zifana noko, le nto imane nje isicelo sokususwa ekuhlanganyeleni.
Njani & Nokuba Kutheni AmaNgqina Aphela Kwiibandla
Ubomi buya kutshaba okanye ukususwa ekuhlanganyeleni
NjengamaYuda, amaNgqina kaYehova ayatshutshiswa amaNazi
Uncwadi lweNqabayokulinda lwaluvuleleke kakhulu kwaye lubaluleke kakhulu ngoRhulumente wamaNazi eJamani. Ngenxa yoko, kwakuqhelekile ukuba amaNgqina aseJamani afakwe kwiinkampu zoxinzelelo njengamaYuda. Kukho ividiyo, ebizwa ngokuba yi "Purple Triangles," echaza oku.
AbaBhapathiziwe kuphela baqwalaselwa ngokupheleleyo bafaka amaNgqina kaYehova
Amacawa amaninzi amaKristu avumela ubulungu kunoma ubani owufunayo ngaphandle kokuthintela, kodwa iMboniselo yoMbutho idinga ukuqeqeshwa (ngokuqhelekileyo unyaka okanye ngaphezulu) nokushumayela ngendlu ngendlu ngaphambi kokuvumela umntu ukuba ajoyine ngokubhaptizwa. UMbutho uthatha ubulungu bezigidi ezingaphezu kwesithandathu, kodwa xa kubalwa ngokwemigangatho yamanye amahlelo, ubulungu bawo buba phezulu kakhulu.
Ukukhanya kukhanya ngakumbi njengoko ukuphela kusondela
I-Watchtower Society iyaziwa ngokutshintsha iinkolelo zayo kunye nemigaqo-nkqubo ngezikhathi ezithile. AmaNgqina akholelwa ukuba uMbutho kuphela unayo "Inyaniso," kodwa ukuba ulwazi lwabo alufezekanga. UYesu ubalathisa ukuba baqonde ngakumbi iimfundiso zikaYehova ngokuhamba kwesikhathi. Ukuchaneka kweemfundiso zabo kuya kwanda njengoko iArmagedon isondela. AmaNgqina aqhubeka eyala ukuba ahloniphe iimfundiso zemihla ngemihla yoMbutho. Ngokungafani noPapa wamaKatolika, iBhunga eliLawulayo alithathi lingafezeki. Kodwa baye bamiselwa nguYesu ukuba baqhube umbutho kaThixo wasemhlabeni, ngoko amaNgqina aya kuthobela iQumrhu Elilawulayo njengokungathi bafezekanga nangona benza iimpazamo.
Kutheni uSc Lewis noJ JR Tolkien baxhomekeke kwiTheology yamaKristu
Abasetyhini abangashadile baninzi ngakumbi kwezopolitiko. Nasi isizathu.
Fumana ukuba umntu oMntu onguMntu oMnene okanye oyiNgcaciso yoMmandla
Kutheni Iikhilikithi Ziyeka Ukukhwaza Xa Usondela?
Isishwankathelo seMvelaphi yeeNkolelo zokuBonga abafundi beNgesi